ကင်းမျှော်စင် | မေ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ဂျာမန် ပေါ်တူဂီ မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်္ဂလိပ်
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဟူသည် ဘုရားသခင်တည်ထောင်သည့် အစိုးရတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးကို အုပ်ချုပ်မည်။ ယေရှုဤသို့ဆိုခဲ့၏– ‘ထို့ကြောင့် သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာ . . . “ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပါစေသော။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော။”’—မဿဲ ၆:၉၊ ၁၀; ဒံယေလ ၂:၄၄၊ ၄၅။
ယေရှုသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဘုရင်အဖြစ် မွေးဖွားခြင်းခံရသည်။ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ယေရှု၏မိခင်ကို ဤသို့ဆိုသည်– “သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ့အား ပေးတော်မူမည်။ ထိုသူသည်လည်း . . . အုပ်စိုးလိမ့်မည်။” (လုကာ ၁:၃၀-၃၃) ထို့ပြင် ယေရှုသည် မိမိနှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရန် နောက်လိုက်အချို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိတမန်တော်များကို ဤသို့မိန့်ဆို၏– “စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ငါခံရစဉ်တွင် သင်တို့သည် ငါ၌မှီဝဲသောသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့သည့်နည်းတူ ငါသည်လည်း နိုင်ငံတော်အတွက် သင်တို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့၏။” (လုကာ ၂၂:၂၈-၃၀၊ ကဘ; ဒံယေလ ၇:၂၇) ယေရှု၏နောက်လိုက်စုစုပေါင်း ၁၄၄,၀၀၀ တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ကြမည်။—ဗျာ. ၅:၉၊ ၁၀; ၁၄:၁။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိမည်နည်း
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်မှအုပ်ချုပ်မည်။ ယေရှုသည် မိမိတပည့်များကို ဤသို့ဆိုသည်– ‘[ကောင်းကင်၌] သင်တို့နေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှာ ငါသွားရ၏။ ငါသည်သွား၍ သင်တို့နေစရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှ တစ်ဖန်လာပြန်၍ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှာ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့သိမ်းဆည်းမည်။ . . . ငါသည် ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်။’—ယောဟန် ၁၄:၂၊ ၃၊ ၁၂; ဒံယေလ ၇:၁၃၊ ၁၄။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဆိုးသွမ်းမှုကို မည်သို့ပြုမည်နည်း
ယေရှုသည် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဆိုးသွမ်းသူများကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ကိုယ်တော် ဤသို့မိန့်တော်မူ၏– ‘လူသား[ယေရှု]သည် မိမိဘုန်းကိုဆောင်လျက် သန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန် အခြံအရံနှင့်တကွ ကြွလာတော်မူသောအခါ ဘုန်းရှိသောပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်၍ ရှေ့တော်၌ လူမျိုးအပေါင်းတို့ ကို စုဝေးစေတော်မူသဖြင့် . . . လူအပေါင်းတို့ကို အသီးအခြားခွဲ၍ . . .ထို [ဆိုးသွမ်းသော] သူတို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရာသို့လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကား ထာဝရအသက်ရှင်ရာသို့လည်းကောင်း သွားကြလတ္တံ့။’—မဿဲ ၂၅:၃၁-၃၄၊ ၄၆။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ လက်အောက်ခံများအဖြစ် မြေကြီးပေါ်တွင် မည်သူတို့နေထိုင်မည်နည်း
“စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သူတို့သည် ပျော်ရွှင်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် မြေကြီးကို အမွေရကြလိမ့်မည်” ဟုယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၅:၅၊ ကဘ; ဆာလံ ၃၇:၂၉; ၇၂:၈) တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမေတ္တာထားတတ်ရန် သင်ယူနေသူများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြည့်နေပေမည်။ ယေရှုက မိမိနောက်လိုက်များကို ဤသို့ပြောခဲ့သည်– “သင်တို့သည် အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟု ပညတ်သစ်ကိုငါပေး၏။ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင် လူအပေါင်းတို့သည် ထိုမေတ္တာကိုထောက်၍ သင်တို့သည် ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကို သိရကြလိမ့်မည်။”—ယောဟန် ၁၃:၃၄၊ ၃၅။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မြေကြီးပေါ်ရှိလူသားထုအတွက် အဘယ်အရာပြုလုပ်ပေးမည်နည်း
ယေရှုသည် ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတော်မူမည်။ ယေရှု မြေကြီးပေါ်ရှိစဉ် လူအုပ်အား “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြော၍ နာသောသူတို့ကို ချမ်းသာပေးတော်မူ၏။” (လုကာ ၉:၁၁) တမန်တော်ယောဟန်သည် အဆင်းအာရုံတစ်ခုတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောယေရှုကို မြင်ပြီးနောက် ဤသို့ပြောခဲ့၏– “ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ကိုလည်း ငါမြင်၏။ . . . ကောင်းကင်မှကြီးသောအသံကား ‘ဘုရားသခင်၏တဲတော်သည် လူတို့တွင်ရှိ၏။ . . . ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိ၌ မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော်မူမည်။ နောက်တစ်ဖန် သေဘေးမရှိရ။’”—ဗျာ. ၂၁:၁-၄။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် မြေကြီးကို ပရဒိသုအဖြစ် ပြန်လည်တည်ထောင်မည်။ ယေရှုနှင့်အတူအသတ်ခံရသောလူဆိုးက “သခင် ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ” ဟုလျှောက်ဆို၏။ ယေရှုကလည်း “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။—လုကာ ၂၃:၄၂၊ ၄၃; ဟေရှာယ ၁၁:၄-၉။
ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များကို သမ္မာကျမ်းစာ အမှန်တကယ်သွန်သင်ရာမှာ အဘယ်နည်းစာအုပ် အခန်း ၈ တွင်ရှု။ *
^ အပိုဒ်၊ 16 ယေဟောဝါသက်သေများထုတ်ဝေသည်။
w08 - 2008-05-01
သဘာဝတရားတွင် ပေါ်လွင်နေသော ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာ
ကောင်းကင်ကြယ်များတွင် ပေါ်လွင်နေသော ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်
မိခင်မေတ္တာတွင် ပေါ်လွင်နေသော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်
မိသားစုပျော်ရွှင်မှုအတွက် သော့ချက်များ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း
စော်လမွန်ကျွန်းစုတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်
ဘာသာပြန်ကျမ်းစာကောင်း တစ်အုပ်ကို သင်မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဒနာကို ကိုယ်တော် နားလည်တော်မူ
ကင်းမျှော်စင် မေ ၂၀၀၈